မြန်မာ တစ်နိုင်ငံလုံး ကို မျိုးတုန်းသွားေ စမယ့် အီကြာကွေး – Shwewiki.com
အီကြာကွေး ကြော်….မ နေ က ကြော် ထား ပြီး သား ညစ် ထပ် ထပ် ဆီ ကျန်တစ် ပိ သာလောက် ကို အ ကြော် ဆ ရာ လေးကို သောင်း ( အ မည် လွှဲ ) ကထင်း မီး ထိုး ပြီး အ ပူ ပေး နေ သည် ။အ ချိန် က နံ နက် ၄ နာ ရီ ၃၀ ။ နေ ရာ က ရန် ကုန် မြို့ ……။
ဆီ ကျန် တွေ ဘွမ်း ဘွမ်း ဆူ ပူ လာ တော့ မှဆီ ပူ ဒယ် အိုး ကြီး ထဲ ကို( တစ် လီ တာ ဆန့် ရေ သန့် ဘူး ခွန် ထဲ တွင် )ဆီ အ ပြည့် ထည့် ထား သောဝါတာတာဖြူတူတူ စားအုံးဆီဆီဘူး နှစ်လုံးကို ဘူးခွန် ကောဆီ ပါဆီ ပူ အိုး ကြီး ထဲ အ ကြော်ဆရာ ကခြေ မြန် လက် မြန် ပစ် ထည့် လိုက် သည် ။နောက် ပြီး ဂျွစ် ဂျွစ် ဂျွစ် အ သံ ၆ ချက် လောက်အ ဆက် မ ပျက် မည် သံ ကြား သည် ။ လက် ဖက် ရည် ဆိုင် ပေါ် က သူ များ သောက် ပြီးထား ပစ် ခဲ့ သော ရေ သန့် ဘူး ခွန် အ လွတ် ၆ ဘူး ကိုဖိ နပ် စီး ထား တဲ့ ခြေ ထောက် နဲ့ ပြား သွား အောင်ဖိ နင်း ပြီး ဆီ ပူ အိုး ကြီး ထဲ အ ကုန် ပစ် ချ လိုက် သည်။
ဆီ အ ကျန် က တစ် ပိ သာ ။တစ်လီတာဘူးနှစ်လုံး ထဲက ဆီအသစ်က တစ်ပိ သာ ။ပေါင်း ဆီ နှစ်ပိ သာ ။ရေသန့်ဘူးခွန် နဲ့ ထည်ထားတဲ့ဆီဘူးက နှစ်လုံး ။ရေသန့်ဘူးခွ် တွေ ပြားပြီး ထည့်လိုက်တာကခြောက်ဘူး ။ ပေါင်း ရေသန့်ဘူး ရှစ်ဘူး ဖြစ်၏ ။ဆီ နှစ်ပိသာ ကို ရေသန့်ဘူး ခွန် ရှစ်ဘူး ကပျော်ကျလာ သော ကော် ရည်ပူ တွေ နဲ့တ သား ထဲ ပေါင်း သွား တယ်လို့မှတ်ယူလိုက်ပါ ။
ဒါ မှ နံ နက် ၄ နာ ရီ ကြော် ထာ တဲ့အီ ကြာ ကွေး က ည နေ မိုး ချုပ် သည့် အ ချိန် အ ထိလေ သ လပ် ခံ ထား သော် လည်းမ ပျော့ သွား ပဲ ဆင် နှာ မောင်း လိုမာ တောင် နေ မှစား တဲ့ လူ က ကြိုက် မှာ ကိုး ဗျ ။ ဆီ ပူ အိုး ထဲ ဆီတစ် ပိ သာ လျှင်ရေ သန့် ဘူး ခွန် ၅ ဘူး နှုန်း လောက်ပစ် ထည့် နိုင် မှ အီ ကြာ ကွေး ကကြွပ် ရွှ သွား ပြီး လေ သ လပ် လျှင်ပျော့ စိ မ သွား ပဲ နေ မှလူ ကြိုက် များ သ ကိုး ။
နောက်ပြီး ဆက်ပြီး ပြောရအုံးမယ်…….လက် ညှိုး အရွှယ် လောက် ဂျုံ အ ချောင်း လေးနှစ် ချောင်း ပူး ကပ် ပြီးဆီပူ ဒယ်အိုးပစ် ထည့်လိုက် ပြီးပြန် ဆယ် လိုက် တော့အ ရှည် ဆယ် လက် မ လုံး ပတ် နှစ် လက် မ အရွှယ်မှာ အလယ်မှာ အ ခေါင်း ပေါက်ကြီး နဲ့ထွက် လာတာအံ့မခန်း လိလိပါပဲဗျာ ။
ကြီး ထွား နှုန်း သိပ် များ အောင်ဓာ တု ဗေဒမှုန့်ပွ ဆေး ဆော် ဒါ မှုန် တွေအ လွန်အမင်း ဂျုံနဲ့ရော နယ်ထားတာကိုးဗျ ။ဒါ နဲ့ ကိုယ့်အိမ် မှာကိုယ် ဂျုံနယ် ပြီးအီကြာ ကွေး စမ်း ကြော် ကြ ည့်တယ် ။လက် ညှိုး အရွှယ် ဂျုံအ တောင့် က လေး နှစ် တောင့် ပူး ပြီးဆီ ပူအိုး ထဲ ထည့်လိုက်တာ မူလ အရွှ ယ် ပဲ ပြန်ထွက်တယ် ။
ကြီး ထွား မလာဘူး ။ ထည့်တုံးကအ ဖြူ ရောင်ပြန် ထွက် လာ တော့အ ဝါ ရောင် စားလို့တော့အရသာရှိ သား ။ပြန် ရောင်းရင် တော့ဘယ်သူမှကြိုက်မှာ မဟုတ်ဘူး ။ ။နောက်တစ်ခုက ပဲမျိုးစှုံစ် ပြန် ကြော် အချိန်က နေ့လည် ၂နာရီ ။နေရာက မ န္တ လေးမြို့ ။ခရီးသွားဟန်လွှဲခင်မင်တဲ့သူငယ်ချင်းရှိရာ အလည်ဝင်ခဲ့၏ ။
သူတို့မိသားစုကမ န္တ လေးမြို့ကြီးမှာလက်ဖက် ဂျင်း နဲ့ပဲမျိုးစုံ နှစ် ပြန် ကြော်ကြော် ရောင်းပြီးအလွန်စီးပွါးတက်၏ ။ သေး ပေါက် ချင် ( အ ပေါ့ သွား ) ချင်တာနဲ့အိမ်သာဘက်ရှိရာ အိမ်အ နောက်ဘက်ကိုထွက်သွားကြည့်လို့ ပြန်အထွက်ကျွန် တော်လည်း စပ်စပ်စုစုသူ့ ခြံဝန်းအကျယ် ကြီး ထဲကအ ကြော်ဖို ဘက်ထွက်ကြ ည့်မိ့တဲအခါ….
အား ပါး ပါး … … … ထင်းထားတဲ့ဂုံ ဒေါင် ဘေး မှာတစ်တင်းခွဲအိပ်နဲ့ထည့်ထားတဲ့ရေသန့်ဘူးခွန်အ ဟောင်း တွေအိတ် နှစ်ဆယ် လောက် တွေ့တယ် ။ပဲ မျိုး စုံ နှစ် ပြန် ကြော် တွေကြွပ်ရွှပြီး လေသလပ်ခံနိုင် ပြီးမ ပျော့ သွား အောင်ဆီပူမိုးဗြဲဒယ် အိုးကြီးထဲကိုရေသန့်ဘူးခွ် တွေထည့်ရတာ လေ ။ဒါမှ နှစ် ပြန် ကြော် ကြွပ်ရွှပြီးစား ကောင်း တာ။
အီကွာကှေး ကွျော….မ နေ က ကွျော ထား ပွီး သား ညဈ ထပျ ထပျ ဆီ ကနျြတဈ ပိ သာလောကျ ကို အ ကွျော ဆ ရာ လေးကို သောငျး ( အ မညျ လှဲ ) ကထငျး မီး ထိုး ပွီး အ ပူ ပေး နေ သညျ ။အ ခြိနျ က နံ နကျ ၄ နာ ရီ ၃၀ ။ နေ ရာ က ရနျ ကုနျ မွို့ ……။
ဆီ ကနျြ တှေ ဘှမျး ဘှမျး ဆူ ပူ လာ တော့ မှဆီ ပူ ဒယျ အိုး ကွီး ထဲ ကို( တဈ လီ တာ ဆနျ့ ရေ သနျ့ ဘူး ခှနျ ထဲ တှငျ )ဆီ အ ပွညျ့ ထညျ့ ထား သောဝါတာတာဖွူတူတူ စားအုံးဆီဆီဘူး နှဈလုံးကို ဘူးခှနျ ကောဆီ ပါဆီ ပူ အိုး ကွီး ထဲ အ ကွျောဆရာ ကခွေ မွနျ လကျ မွနျ ပဈ ထညျ့ လိုကျ သညျ ။နောကျ ပွီး ဂြှဈ ဂြှဈ ဂြှဈ အ သံ ၆ ခကျြ လောကျအ ဆကျ မ ပကျြ မညျ သံ ကွား သညျ ။ လကျ ဖကျ ရညျ ဆိုငျ ပျေါ က သူ မြား သောကျ ပွီးထား ပဈ ခဲ့ သော ရေ သနျ့ ဘူး ခှနျ အ လှတျ ၆ ဘူး ကိုဖိ နပျ စီး ထား တဲ့ ခွေ ထောကျ နဲ့ ပွား သှား အောငျဖိ နငျး ပွီး ဆီ ပူ အိုး ကွီး ထဲ အ ကုနျ ပဈ ခြ လိုကျ သညျ။
ဆီ အ ကနျြ က တဈ ပိ သာ ။တဈလီတာဘူးနှဈလုံး ထဲက ဆီအသဈက တဈပိ သာ ။ပေါငျး ဆီ နှဈပိ သာ ။ရသေနျ့ဘူးခှနျ နဲ့ ထညျထားတဲ့ဆီဘူးက နှဈလုံး ။ရသေနျ့ဘူးချှ တှေ ပွားပွီး ထညျ့လိုကျတာကခွောကျဘူး ။ ပေါငျး ရသေနျ့ဘူး ရှဈဘူး ဖွဈ၏ ။ဆီ နှဈပိသာ ကို ရသေနျ့ဘူး ခှနျ ရှဈဘူး ကပြျောကလြာ သော ကျော ရညျပူ တှေ နဲ့တ သား ထဲ ပေါငျး သှား တယျလို့မှတျယူလိုကျပါ ။
ဒါ မှ နံ နကျ ၄ နာ ရီ ကွျော ထာ တဲ့အီ ကွာ ကှေး က ည နေ မိုး ခြုပျ သညျ့ အ ခြိနျ အ ထိလေ သ လပျ ခံ ထား သျော လညျးမ ပြော့ သှား ပဲ ဆငျ နှာ မောငျး လိုမာ တောငျ နေ မှစား တဲ့ လူ က ကွိုကျ မှာ ကိုး ဗြ ။ ဆီ ပူ အိုး ထဲ ဆီတဈ ပိ သာ လြှငျရေ သနျ့ ဘူး ခှနျ ၅ ဘူး နှုနျး လောကျပဈ ထညျ့ နိုငျ မှ အီ ကွာ ကှေး ကကွှပျ ရှ သှား ပွီး လေ သ လပျ လြှငျပြော့ စိ မ သှား ပဲ နေ မှလူ ကွိုကျ မြား သ ကိုး ။
နောကျပွီး ဆကျပွီး ပွောရအုံးမယျ…….လကျ ညှိုး အရှယျ လောကျ ဂြုံ အ ခြောငျး လေးနှဈ ခြောငျး ပူး ကပျ ပွီးဆီပူ ဒယျအိုးပဈ ထညျ့လိုကျ ပွီးပွနျ ဆယျ လိုကျ တော့အ ရှညျ ဆယျ လကျ မ လုံး ပတျ နှဈ လကျ မ အရှယျမှာ အလယျမှာ အ ခေါငျး ပေါကျကွီး နဲ့ထှကျ လာတာအံ့မခနျး လိလိပါပဲဗြာ ။
ကွီး ထှား နှုနျး သိပျ မြား အောငျဓာ တု ဗဒေမှုနျ့ပှ ဆေး ဆျော ဒါ မှုနျ တှအေ လှနျအမငျး ဂြုံနဲ့ရော နယျထားတာကိုးဗြ ။ဒါ နဲ့ ကိုယျ့အိမျ မှာကိုယျ ဂြုံနယျ ပွီးအီကွာ ကှေး စမျး ကွျော ကွ ညျ့တယျ ။လကျ ညှိုး အရှယျ ဂြုံအ တောငျ့ က လေး နှဈ တောငျ့ ပူး ပွီးဆီ ပူအိုး ထဲ ထညျ့လိုကျတာ မူလ အရှ ယျ ပဲ ပွနျထှကျတယျ ။
ကွီး ထှား မလာဘူး ။ ထညျ့တုံးကအ ဖွူ ရောငျပွနျ ထှကျ လာ တော့အ ဝါ ရောငျ စားလို့တော့အရသာရှိ သား ။ပွနျ ရောငျးရငျ တော့ဘယျသူမှကွိုကျမှာ မဟုတျဘူး ။ ။နောကျတဈခုက ပဲမြိုးစှုံဈ ပွနျ ကွျော အခြိနျက နလေ့ညျ ၂နာရီ ။နရောက မ န်တ လေးမွို့ ။ခရီးသှားဟနျလှဲခငျမငျတဲ့သူငယျခငျြးရှိရာ အလညျဝငျခဲ့၏ ။
သူတို့မိသားစုကမ န်တ လေးမွို့ကွီးမှာလကျဖကျ ဂငျြး နဲ့ပဲမြိုးစုံ နှဈ ပွနျ ကွျောကွျော ရောငျးပွီးအလှနျစီးပှါးတကျ၏ ။ သေး ပေါကျ ခငျြ ( အ ပေါ့ သှား ) ခငျြတာနဲ့အိမျသာဘကျရှိရာ အိမျအ နောကျဘကျကိုထှကျသှားကွညျ့လို့ ပွနျအထှကျကြှနျ တျောလညျး စပျစပျစုစုသူ့ ခွံဝနျးအကယျြ ကွီး ထဲကအ ကွျောဖို ဘကျထှကျကွ ညျ့မိ့တဲအခါ….
အား ပါး ပါး … … … ထငျးထားတဲ့ဂုံ ဒေါငျ ဘေး မှာတဈတငျးခှဲအိပျနဲ့ထညျ့ထားတဲ့ရသေနျ့ဘူးခှနျအ ဟောငျး တှအေိတျ နှဈဆယျ လောကျ တှတေ့ယျ ။ပဲ မြိုး စုံ နှဈ ပွနျ ကွျော တှကွှေပျရှပွီး လသေလပျခံနိုငျ ပွီးမ ပြော့ သှား အောငျဆီပူမိုးဗွဲဒယျ အိုးကွီးထဲကိုရသေနျ့ဘူးချှ တှထေညျ့ရတာ လေ ။ဒါမှ နှဈ ပွနျ ကွျော ကွှပျရှပွီးစား ကောငျး တာ။